भारतीय नागरिक नेपाल आउँदा अनिवार्य गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने (सहि वा गलत ?) – Onlines Time
भारतीय नागरिक नेपाल आउँदा अनिवार्य गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने (सहि वा गलत ?)
February 3, 2021 February 14, 2021 onlinestimeLeaveaComment on भारतीय नागरिक नेपाल आउँदा अनिवार्य गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने (सहि वा गलत ?)
भारतीय नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा अनिवार्यरुपमा गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले नेपाल–भारतसँग जोडिएका सीमानाका खुला गरेसँगै भारतीय नागरिकलेनेपाल प्रवेश गर्नका लागि गृहमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार भारतीय नागरिक के प्रयोजनका लागि नेपाल आउनेखलङ्गा नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् ।
सरकारले को’रोना भाइरसको जोखिम नियन्त्रणका लागि भन्दै गत चैत ११ गतेदेखि नेपाल–भारत सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेकोथियो । सरकारी निर्णयमा नाका बन्द भए पनि आवतजावत भने हुँदै आएको थियो । नेपाली नागरिक सहजरुपमा भारत जान पाउने भएका छन् । तर, भारतीय नागरिकले नेपाल प्रवेश गर्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको हो ।
नायीका स्वेता खड्का सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सकृय छन् । उनले सिन्धुपाल्चोकमा माझी समुदायका लागि सामुहिक बस्ती निर्माण गरिरहेकी छन् । तर सो वस्ती निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै आफुलाई माझी बस्ती बनाउन आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर आश्वासन दिएकाहरुले धोका दिएको बताएकी छन् ।नायीका स्वेता खड्का सामाजिक काममा पनि उत्तिकै सकृय छन् । उनले सिन्धुपाल्चोकमा माझी समुदायका लागि सामुहिक बस्ती निर्माण गरिरहेकी छन् ।
तर सो वस्ती निर्माणको काम अझै सकिएको छैन । उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै आफुलाई माझी बस्ती बनाउन आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर आश्वासन दिएकाहरुले धोका दिएको बताएकी छन् ।नायिका स्वेता खड्काले सन् २०७४ मै सिन्धुपाल्चोकमा एकीकृत माझी बस्ती निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसका लागि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अभियान चलाइन् । देश विदेश गएर आर्थिक संकलनको काम गरिन् । केही दाताहरुले उनलाई सहयोग गर्ने बाचा गरे । तर त्यसरी बाचा गरेकाहरुले धोका दिएका कारण आफ्नो अभियान सफल हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
स्वेता श्री फाउण्डेसनको तर्फबाट माझी बस्ती बनाउने घोषणा भएको थियो। तर हालसम्म पनि उक्त माझी बस्तीको निर्माण सम्पन्न भएको छैन। मंगलबार स्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकको निर्माणाधीन माझी बस्ती ऋणमा रहेको जानकारी दिएकी छिन्। उनले यस बस्ती निर्माण सम्पन्न गर्न सहयोगको अपिलसमेत गरेकी छिन्।धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरिरहेको गौतमवुद्ध क्रिकेट रंगशालाको जस्तै अवस्था सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्तीको भएको उनको भनाइ रहेको छ। उनले सहयोग गर्छु भन्नेले सहयोग नगरेपछि बस्तीको निर्माण कार्य अलपत्र परेको गुनासो गरेकी हुन्।उनले लेखेकी छन् ‘धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशनु को झै हाम्रो पिंडा पनि उहि हो । निर्माणाधिन माझी बस्तीले पनि रिण बोकेर नै बसेकोछ । स्थानिय सरकार , सरोकारवाला निकाय तथा बिभिन्न दक्ताहरुलाई माझी बस्तिसंग जोडिदिने हाम्रो प्रयासमा धेरै मनकारी सहयोगीहरु भेटिनु भयो अनि आफ्नो क्षमता, दक्षता र गक्षले भ्याए सम्मको सहयोग गर्नु भयो ।
तर केहि यस्ता दाताहरु पनि भेटिए जस्ले सहयोग रकम बोल्नु भयो तर सहयोग उपलब्ध गराउनु भएन । हामिले कुनै जोर जबर्जस्ती नगरिकनै आफ्नै मनले, स्वस्तस्फुर्त रुपमा कबुल गर्नु भएको सहयोग प्रदान गर्नलाई आनाकानी गर्नेहरुको लिष्ट लामै छ । खैर , दान (धर्म र कर्म भनेको मनदेखी स्फुटन हुने कुरा हो । हामिले त सहयोगको अपिलसम्म गर्ने हो ,बलजफती गर्ने होईन ।तथापी , आफ्नो प्रतिवद्दता र कटिवद्दतालाई भुलेर गरिवहरुको आशा र भरोशा माथी खेलवाड गर्नु भने पक्कै राम्रो होईन । पुरा गर्न नसक्ने(बाचा, पुर्ती गर्न नसक्ने (आस्वासन र दिन नसक्ने (सहयोगको कुनै अर्थ छैन । अत स् आफुलाई समाज सेवी को रुपमा चिनाउन कोही कसैको भरोशा माथी खेलवाड नगरौ ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
का’ला’पानीका ज’नता माथि इन्डि’याको अ’त्या*चार | नेपालीहरुको घमा*सान प्रति*कार | लिम्पि’याधुरा घु’मेर हेर्दा (सेयर गरि’दिनु होला)
March 3, 2021 March 3, 2021 onlinestime
कन्चनका बिद्यार्थीहरु समबेदना दिन धुरुधुरु रुदै पुगे ,यसरी सम्झिए कन्चनलाई ,मन थामेर (भिडियो हेर्नुस्)
March 14, 2021 onlinestime
Exclusive:बुबालाइ बृद्धआश्रममा छोड्ने छोराकोमा गंगा पुग्दा पर्यो ल फडा मु द्दा हाल्छु भन्दै गर्जिए
January 14, 2021 January 14, 2021 onlinestime